2021 မှာ ဝယ်သင့်တဲ့ Free Fire အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း ၆ မျိုး | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire 2021 မှာ ဝယ်သ...
2021 မှာ ဝယ်သင့်တဲ့ Free Fire အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း ၆ မျိုး
Garena Free Fire မှာ ဂိမ်းကစားရတဲ့ အတွေ့အကြုံမှာ ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် Battle Royale Action နဲ့ အလွန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ Event တွေအပြင် အခြား ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ Item တွေလဲရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ Free Fire Diamond တွေ အသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ Booyah Quest ကို ဂိမ်းတွင်းမှ အရာများကို တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ!
Free Fire မှာ Character တွေပြောင်းလည်းပြီး ကစားကြည့်ပါ။ Free Fire Diamond ကို အသုံးပြုပြီး Character အသစ်တွေဝယ်လို့ရပါတယ်။ Character တစ်ယောက်စီက တိုက်ခိုက်ဖို့ ထူခြားတဲ့ Skill တွေရှိပါတယ်။ အဖွဲ့တွေနဲ့ အတူပေါင်းစည်းပြီး Battle တွေမှာ အနိုင်ရရှိဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ကိုတိုင်ရှာဖွေရမှာပါ။ ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးသမား Cristiano Ronaldo (Chrono) ၊ Joe Taslim ရဲ့ incarnation in Jota ၊ အိန္နယစတား Jai က Hrithik Roshan’s counterpart တို့အပါအတင် အခြား Character ပေါင်း 37 ယောက်ရှိပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့ Reward တွေလိုချင်ပါသလား? ဒါဆို Elite Pass ကို ရယူလိုက်ပါ။ သူက Tier ကို ကြည့်ပြီး Reward ပေးတာကြောင့် Level တက်ရင်တက်သလို ကစားသမားတွေက သီးသန့် Reward တွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ Pass တိုင်းမှာ Exclusive Item အသစ်တွေ လတိုင်းပါရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Free Fire Diamond ကို အသုံးပြုပြီး 499 နှင့် 999 Diamond ကျရှိသော Elite Pass သို့မဟုတ် Elite Bundle နှင့် အတူ အခြား 10000 Diamond တန်သော Exclusive Reward တွေကိ ရယူလိုက်ပါ။ Willful Wonders တွေ ယခုဘဲထွက်ရှိပြီး Elite Pass အကြောင်း ဒီမှာ လေ့လာလိုက်ပါ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ဘယ်သူကမချစ်ဘဲနေမလဲနော်? သင့်ရဲ့ Diamonds တွေကို အသုံးပြုပြီး ဒီချစ်စရာကောင်းပြီး အားကိုးရနမဲ့ အဖော်လေးတွေကို ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ ဘေးနားက အဖော်လေးဘဲ မဟုတ်ဘဲ ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေမှာ Restoring EP (Ottero) တို့၊ Grenades တွေပစ်နိုင်တဲ့ အကွာအ‌‌ဝေးပိုများစေတာတို့ (Beaston) ၊ ပစ္စည်းသယ်နိုင်နှုန်း Inventory Space ပိုများစေနိုင်တာတို့ ( Night Panther) ၊ Gloo တွေထက်ထုတ်နိုင်တာတို့ (Mr.Waggor) လို ထူးခြားတဲ့ Abilities လေးတွေပါရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေက Free Fire မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပါ။
ဆိုင် (Store) ကို သွားရင် Crates ဆိုတဲ့ Tab ကိုတွေ့မှာပါ။ အဲ့ကနေ Diamond တွေ အသုံပြုပြီး Reward တွေရဖို့ မတူညီတဲ့ Packages တွေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ Bundle Suits နှင့် အခြား Accessories တွေကို ဒီကရရှိနိုင်ပါတယ်။ Mythic Items တွေတောင်ကံကောင်းရင်ရအုန်းမှာနော်။
ဒါကလဲ ဆိုင်မှာရရှိနိုင်ပြီး Gun Skin တွေက ပစ်အားကောင်းနိုင်ပြီး ရန်သူတွေ အထင်ကြီးစေနိုင်ပါတယ်။ Diamond တွေကို အသုံးပြုပြီး Swordsman Legends SVD ၊ Champion Boxer MP5 နဲ့ Spirited Overseers M60 တို့လိုဟာတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Gun Skin က သင့်သေနတ်တွေကို လှပစေပြီး အလွန်မိုက်စေပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာ ဒါတွေကလဲ အရေးကြီးတယ်လေနော်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
ဒါပေါ့ Emote တွေကိုတော့ ဘယ်မေ့ထားလို့ရမလဲ! သင်က Dab ပြတာတို့ ၊ Wiggle Walk ( တွန့်လိမ်ပြီး လမ်းလျောက်ပြတာတို့ ၊ Baby Shark အက ကပြတာတို့ လို အမြဲ ဟာသတွေဘဲ လုပ်နေသူတစ်ဦးဆိုရင်တော့ Diamond တွေသုံးပြီး Emote တွေကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက ဂိမ်းထဲမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေပါဘဲနော်။
Special Mention: Fashion items
သင်ကိုတိုင်က အလှအပကြိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင် Diamond လေး အနည်းငယ်အသုံးပြုပြီး ဖက်ရှင်ကြတဲ့ ရှပ်တွေ ဘောင်းဘီတွေ ဝယ်သင့်ပါတယ်။ မိုက်တဲ့ ဆံပင်ပုံကနေ ဦးထုပ်တွေ အထိရှိလို့ သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Free Fire အကောင့်ကို Codashop နဲ့ ဘဲ ငွေဖြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့အုန်းနော်။ ပိုမိုမြန်ဆန် စိတ်ချရတဲ့ ငွေဖြည့်တဲ့ အတွေ့အကြုံကိုရရှိဖို့ အာမခံပြီး ‌ငွေပေးချေမှုစနစ်မျိုးစုံလဲရှိပါတယ်။
Previous articleWild Rift Patch 2.2 – Champions အသစ်များ ၊ Wild Pass ၊ ARAM mode နှင့် အခြားအရာများ
Next articleVALORANT Episode2Act II: New Agent Astra and Prime 2.0 Bundle တွေခုဘဲရရှိတော့မှာပါ